Guddiga Hawlaha Guud - Maalgelinta Broadband
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Guddiga Howlaha Guud - Maalgelinta Broadband
Dhismaha Broadband FAQ
Erey bixin Broadband
Codsadayaasha u Qalma Maalgelinta Gobolka (Hadda ma furna)
• Degmooyinka Adeegyada Dadweynaha
• Degmooyinka Kale ee Ujeeddada Gaarka ah leh
• Shirkadda Quasi-Municipal
• Ururada aan macaash doonka ahayn
• Ururada Iskaashatooyinka
Hay'adaha Gaarka ah:
• Shirkadaha xaddidan ee xaddidan oo loo abaabulay ujeeddada ballaarinta marin u helka khadka
• Ganacsiyo ama shirkado wadaag ah
Si loo hubiyo in deeqda ama amaahda hay'ad gaar loo leeyahay ay ugu horreyn u adeegto danta guud iyo waxtarka dadweynaha, waa inay jirtaa dammaanad qaad in hantida ama kaabayaasha la horumarinayo lagu hayn doono isticmaalka dadweynaha ugu yaraan shan iyo toban sano.
Xaddidaadda Maalgelinta ee Maalgelinta Gobolka
(Hadda ma furna)
• $ 2 milyan halkii mashruuc ee amaahda / deeqda abaalmarinta oo leh xaddiga 50%.
• Mashruucyada ka socda meelaha dhibaatada dhaqaale ka jirto iyo dalka Hindiya waxaa laga yaabaa inay helaan 90% wadarta kharashka mashruuca wadar ahaan oo aan ka badnayn $ 5 milyan.
Wadashaqeynta Gobolka oo dhan
Shirka Wada-hawlgalayaasha Ballaaran ee Gobolka oo dhan (Pdf)
Qorshaha Broadband-ka ee Gobolka oo dhan
Barnaamijka USDA ReConnect
Warqadda Taageerada Dib-u-Xiriir ee Guddoomiyaha
Khariidadaha & Cilmi-baarista
Hoos waxaa ku yaal bandhigyo la siiyay Guddiga oo ku saabsan qadka ballaadhan.
Broadband Broadband 101
Shuruudaha Dhibcaha ee Dhammaan Codsiyada Barnaamijka Broadband (La cusboonaysiiyay 4/27/2021)
Liiska Meelaha Dhibaataysan
Deeqaha Dawlada Dhexe Maalgaliso
Furan Luulyo 14, 2021 - Oktoobar 1, 2021
OGEYSIIS: Tilmaam buuxa oo ku saabsan adeegsiga maalgelinta Coronavirus Capital Projects Account (CVC-2) lama sii deyn waqtigan. Tilmaamaha barnaamijka waa la beddeli karaa iyadoo lagu saleynayo hagida ugu dambeysa.
Codsadayaasha u qalma lacagaha deeqda CVC-2 waa: dawladaha hoose, dawladaha qabaa'ilka, iyo degmooyinka ujeeddooyinka gaarka ah leh. Ma jiro shuruud u dhiganta miisaaniyaddan federaalka.
Guddiga Howlaha Dadweynaha ee Dhismaha Broadband Dhismaha Dawladda Dhexe ee deeqda bixiya ayaa diiradda saaraya howlaha bixiya adeegga internetka ee khadka ballaadhan ee meelaha aan la ilaalin iyo kuwa aan la hayn ee gobolka (25/3 xawaaraha isku xirka ama ka yar). Mashruucyadu waa inay keenaan 100/20 lagu qiyaasi karo adeegga dhammaadka 100/100.CVC-2 maalgelinta waxaa lagu xadiday dawladaha hoose, qabaa'ilka, iyo degmooyin ujeedo gaar ah leh. Fadlan tixraac tilmaamaha dalabka si aad u hesho hagitaan dheeraad ah.
Shaqaalaha Broadband Board Broadband Board ayaa qabanaya aqoon isweydaarsi codsi labaad Sebtember 13, 2021 laga bilaabo 1:00 pm ilaa 2:00 pm si dib loogu eego su'aalaha inta badan la isweydiiyo. Fadlan iska diiwaangali aqoon isweydaarsigan dalwaddii si aad u hesho macluumaad cusub oo ku saabsan habka codsiga iyo tilmaamayaasha dhammaystirka arjiga guulaystay.
Soo gudbinta elektaroonigga ah ee dhammaan codsiyada waa iyada oo loo marayo ZoomGrants. Nuqulada waraaqaha ah lama aqbali doono.
Codso PWB - Dhismaha Broadband ee Deeqaha ay Dowlada Dhexe Maaliso iyadoo loo marayo ZoomGrants. Haddii aad leedahay koontada ZoomGrants, gal oo raac tilmaamaha. Haddii aad tahay isticmaale cusub, buuxi macluumaadka loo baahan yahay ee akoonka cusub ee ZoomGrants si aad u abuurto astaan. Fadlan ha u isticmaalin "The" ereyga ugu horreeya magaca hay'adda. Marka la abuuro astaanta hay'adda, dooro Amaahda Guddiga Hawlaha Guud ee aad rabto inaad codsato, hubi badhanka "codso", oo bilow soo jeedintaada. Jawaabaha si otomaatig ah ayaa loo keydiyaa
Dhismaha Broadband Tilmaamaha Codsiga Deeqda ee ay Dawladdu Maalgeliso (PDF)
Dhismaha Broadband Aragtida Guud ee Codsiga Deeqaha ee Dawlada Dhexe Maaliso (PDF)
ISP Tusaalaha Heshiiska Joogitaanka (PDF)
Qaabka Ogeysiiska Bixiyaha (PDF)
Luulyo 28, 2021 Webinar Application Application (Fiidiyow)
Luulyo 28, 2021 Webinar PowerPoint Codsiga Broadband (PDF)
Luulyo 28, 2021 Webinar FAQ Codsiga Webka ee FAQ (PDF)
Adeegsiga ZoomGrants si aad u Dalbatid Deymaha Guddida Hawlaha Guud (PDF)
Codsadayaasha suurtogalka ah fadlan ogow:
RCW 43.155.160 (5) (o) waxay ubaahantahay codsadayaasha deeqaha dhismaha ee PWB Broadband iyo amaah si ay ulaxiriirto bixiyeyaasha adeega internetka ee maxaliga ah (ISPs) ee udhow aagga mashruuca si loo codsado qorshahooda kor loogu qaadayo adeegga ballaadhinta ee aagga mashruuca xawaaraha buuxinaya ama dhaafaya qeexitaanka federaalka ee adeegga ballaadhinta waqtiga gudahood. dhismaha mashruuca la soo jeediyey. Xiriirkan waa in la sameeyaa ugu yaraan lix toddobaad kahor gudbinta dalabka maalgelinta ee PWB, iyo dukumiintiyada isdhexgalkaan waa in lagu soo gudbiyaa arjiga.
Natiijooyinka Codsiga Dhismaha Broadband 2020
Bishii Oktoobar 23, 2020 Guddiga Hawlaha Guud wuxuu ansixiyay $ 17,828,760 maalgelin loogu talagalay deeqaha dhismaha Broadband iyo Deymaha. Liiska liiska codsiyada iyo abaalmarinta ayaa la heli karaa halkan.
Sahan Qiimeynta Qorsheynta Broadband
Si loo go'aamiyo baahida baahsan ee khadka taleefanka ee Washington, Guddiga Howlaha Guud wuxuu raadinayaa jawaabo Daraasad Qiimeyn Qorsheynta Xadka Broadband oo dhan ah. Sahanku wuxuu gacan ka geysan doonaa qorshaha PWB ee tababarka iyo xoojinta taageerada meelaha gaarka ah: suurtagalnimada, qorsheynta dhismaha ka hor, iyo dhismaha.
Marka la fahmo meesha aad la joogto qorshayntaada iyo barnaamijyadaada ballaadhan, PWB waxay awood u leedahay inay si fiican u qeexdo baahida guud isla markaana u samayso sawir cad oo ay kula xidhiidho wada-hawlgalayaashayada Sharci-dejinta.
Abaalmarinta Deeqda Daraasadda-Suuragalnimada Daraasadda ee 2019
Bishii Diseembar 6, 2019 Guddiga Hawlaha Guud wuxuu ansixiyay $ 450,000 maalgelin loogu talagalay Deeqaha Daraasadda Qorsheynta ee Ballaaran.
Liiska liiska codsadayaasha, guji halkan.
Deeqaha Daraasadda-Fursadda ee Qorshaynta
Wareeg - Waa Xidhan yahay
Deeqaha Daraasadda Qadarka-Broadband-ka ah waxaa loogu talagalay waxqabadyada qorshaynta istiraatiijiyadeed ee fududeynaya keenista adeegga ballaadhinta gudaha aan la hayn degaannada Washington. Wadarta lacagta la heli karo waa $ 500,000, oo leh abaalmarin ugu badnaan oo ah $ 50,000 codsade kasta.
Tilmaamaha Codsiga Deeqda-Fursadda ee Broadband (PDF)
Falanqaynta Aragtida-Baadhitaanka Broadband (PDF)
Suurtagalnimada iyo Deeqda Gaarsiinta
Kordhinta Broadband suurtagelinta iyo fidinta deeqaha waxay taageertaa wacyigelinta dadweynaha iyo waxqabadyada kaqeyb qaadashada ee aasaasaya isla markaana dhiirrigelinaya dadaallada ku saleysan bulshada ee keenaya kaabayaasha khadka ballaadhan meelaha aan la ilaalin. Dadaallada ku saleysan bulshada, sida Kooxaha Waxqabadka Broadband, ayaa lagama maarmaan u ah in la hubiyo in baahiyaha bulshada la daboolay marka la qorsheynayo ballaarinta ballaadhinta.
Tilmaamaha Codsiga Deeqda Fidiyaha Baaxadda iyo Gaarsiinta (PDF)
Falanqaynta Codsiga Deeqda Fidiyaha Baaxadda iyo Gaarsiinta (PDF)
Maamulayaasha mashruucu waxay halkan u joogaan inay kaa caawiyaan sidii aad u guuleysan lahayd mashruucaaga. Maamulaha Mashruuca PWB Broadband waa:
Maamulaha Barnaamijka Broadband
Ku soo biir Liiska Email-ka Broadband
Amaah Broadband iyo Buug Gacmeed iyo Foomam
Buug-gacmeedka Barnaamijka Amaahda iyo deeqaha
Foomamka Gudbinta Qiimaha Dhismaha ee 2020
4-B U hogaansanaanta Gobolka ee Bixinta Mushaharka
MRSC Mushaharka Mushaharka
6-Foomka PWB EZ-1
6-B GEO 05-05 Liiska Hubinta Dib-u-eegista Kheyraadka Taariikhda & Dhaqanka
6-C Luqad Baadhis La'aan ah
8-Warbixinta Dhameystirka Mashruuca Dhismaha
Foomka Oggolaanshaha Sawirka
PWB Broadband Barnaamijka Dib u Dhigista Bixinta 2 Sano
Codsiga Kordhinta Qandaraaska Barmaamijka PWB
Dib-u-eegista Dhaqanka (GEO 21-02, Qeybta 106)
Si loo ilaaliyo dhaxalka hidaha iyo dhaqanka ee gobolka Washington, Gudoomiyaha Gobolka Jay Inslee ayaa saxiixay Amarka Fulinta 21-02 (GEO 21-02). Qaatayaasha lacagaha raasumaalka dawladdu waa inay kala tashadaan Waaxda Qadiimiga & Ilaalinta Taariikhda (DAHP) iyo qabiilooyinka Hindida ee Federaalku aqoonsan yahay ee laga yaabo inay dano dhaqameed iyo / ama taariikhi ah ama welwel ka qabaan agagaarka mashruuca. Si kastaba ha noqotee, haddii mashruucu ku xiran yahay Qeybta 106 ee Xeerka Ilaalinta Taariikhda Qaranka iyada oo loo marayo kaqeyb qaadashada federaalka (sida adeegsiga maalgalinta Federaalka ama baahida loo qabo helitaanka rukhsadaha Federaalka), markaa Amarka Fulinta ee Guddoomiyaha Gobolka (GEO) 21-02 ayaan loo baahnayn.
Qaatayaasha horay ugama socon doonaan waxqabad kasta oo dhismo ama dhismo ah oo carqaladeyn doona carrada (sida, qodista ceelasha tijaabada ah, dhameystirka shaqooyinka teknolojiyada, qiimeynta, nadiifinta, iwm), ama howlaha dhismaha illaa GEO 21-02 la dhameystiro ( iyo / ama labadaba nidaamka SERP iyo 106, haddii ay khuseyso) iyo PWB ayaa soo saaray warqad uhoreyntii ugu dambeysay. Haddii waxqabadyo dhulka kaqariira ay dhacaan kahor qaataha la helo warqadda ugu dambeysa ee u hoggaansamida, maalgelinta amaahda PWB ayaa khatar galaysa.
GEO 21-02 Maamulka Nidaamka
Connie Rivera waa xiriiriyaha koowaad ee Guddiga Howlaha Guud ee ku saabsan geeddi-socodka GEO 21-02. Abaalmarinta qaatayaasha waxay howsha ku bilaabaan iyagoo u gudbinaya foomka EZ1 Maamulaha Barnaamijka PWB & Xiriiriyaha Qabiilka. Agaasimaha Barnaamijka PWB & Xiriiriyaha Qabiilku wuxuu la-tashiga la sameyn doonaa DAHP iyo Qabiilooyinka. Waxaad ku soo diri kartaa agab email ah Connie.Rivera@commerce.wa.gov ama emayl u dir:
Nidaamka 'GEO 21-02' wuxuu ubaahanyahay qaatayaasha abaalmarinta si ay u qeexaan aagga mashruuca dhismaha saameynta ay yeelan karaan, ayna aqoonsadaan dhisme kasta ama dhismeyaal 45-sano ama ka weyn ah oo ku dhex yaal goobta mashruuca. Mashruucyada qorsheynaya inay beddelaan qaab-dhismeedka da'da 45-sano ama ka weyn, sahanka kaydinta ee khadka tooska ah waa inuu ku dhammaystiraa Qaataha. The DAHP waxay soo saari kartaa jawaabo balaaran oo ku saabsan gudbinta. Jawaabta guud waa "Wax saameyn ah kuma lahan Hanti dhaqameedka / Taariikhda". Haddii aad hesho warqad noocaas ah, waxaad dhammaystirtay qaybta DAHP ee dib u eegista.
Haddii DAHP u baahan tahay macluumaad dheeri ah (dhammaystirka foomam dheeri ah, sahamin dhaqameed, qorshe daahfurnaan ah, iwm) waa inaad u hoggaansantaa codsiga. Waa macquul inaad ubaahantahay shaqaaleeyaan xirfad yaqaan cilmiga dhulka si tan wax looga qabto. Kaliya marka DAHP ay ku waafaqdo qalabka dheeriga ah ee la bixiyay ayaa ah qaybta DAHP ee GEO 21-02 oo dhameystiran. Mashruucyada qorsheynaya inay beddelaan qaab-dhismeedka da'da 45 sano ama ka weyn, an sahanka internetka waa in la buuxiyaa.
Amarka Gudoomiyaha ee Fulinta 21-02 (PDF)
DAHP - GEO 21-02 Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo
Xisaab Ballaadh Gobol oo dhan
Xisaab-fidinta Xadka Guud ee Gobolka waxaa lagu maalgeliyaa qoondaynta sharci-dejinta, dakhliga iibka curaarta ee ay sharciyeysay sharci-dejintu, dib u bixinta amaahda, ama ilo kale oo sharci ah.
Sannad-sannadeedka 2019-21, Xisaab-fidiyaha Guud ee Gobolka wuxuu helay $ 21.5 milyan oo wareejin ah oo laga soo diray Xisaabta Kaalmada Hawlaha Guud (PWAA) ee loogu talagalay mashaariicda raasamaalka ballaadhan, oo ka yar kharashyada hawlgalka ee shaqaalaha barnaamijka.